I-Visa yabakhenkethi eIndiya | IVisa abakhenkethi kwi-Intanethi yaseIndiya
I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya
Faka isicelo se-India eTourist Visa
Abahambi abaya eIndiya abanjongo zabo ikukubona/ukuzonwabisa, ukudibana nabahlobo kunye nezalamane okanye iNkqubo yeYoga emfutshane kufuneka bafake isicelo seVisa yabakhenkethi yaseIndiya ngefomathi ye-elektroniki, ekwabizwa ngokuba yi-eTourist Visa yaseIndiya.
IVisa yabakhenkethi yaseIndiya iyafumaneka kwabo batyeleli bajonge ukutyelela eIndiya ixesha elingekho ngaphezu kweentsuku ezili-180 ngexesha.
Abahambi abaya eIndiya bafanelekile ukufaka isicelo se-an IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi kule webhusayithi ngaphandle kokundwendwela Embassy yase India. Injongo yohambo mayingabi yeyorhwebo ngokwemvelo.
Le Visa yokhenketho yaseIndiya ayifuni isitampu somzimba kwipasipoti. Abo bafaka isicelo seVisa yoKhenketho lwaseIndiya kule webhusayithi baya kunikwa ikopi yePDF yeVisa yoKhenketho lwaseIndiya eya kuthunyelwa ngombane nge-imeyile. Ikopi ethambileyo yale Visa yabakhenkethi yaseIndiya okanye iphepha elishicilelwayo liyafuneka ngaphambi kokuqala ngenqwelomoya / uhambo oluya eIndiya. IVisa enikwa umhambi irekhodwa kwinkqubo yekhompyuter kwaye ayifuni isitampu somzimba kwipasipoti okanye kwikhuriya yencwadana yokundwendwela nakweyiphi na iofisi yeVisa yaseIndiya.
Ingaba isetyenziselwa ntoni iVisa abakhenkethi eIndiya?
IVisa yabakhenkethi yaseIndiya okanye iVisa yeTourist ingasetyenziselwa ezi zinto zilandelayo:
Uhambo lwakho lolonwabo.
Uhambo lwakho kukubona ngokubona.
Uza kudibana namalungu osapho kunye nezihlobo.
Utyelele eIndiya ukuya kudibana nabahlobo.
Uya kwiNkqubo yeYoga / e.
Uza kwizifundo ezingadlulanga kwiinyanga ezi-6 ubude kunye nezifundo ezinganikezeli isidanga okanye isiqinisekiso sediploma.
Uza umsebenzi wokuvolontiya ukuya kuthi ga kwinyanga enye ngexesha.
Le Visa ikwafumaneka kwi-Intanethi njenge-eVisa India ngokusebenzisa le webhusayithi. Abasebenzisi bayakhuthazeka ukuba bafake izicelo kwi-Intanethi kule Visa yase-Indiya ekwi-Intanethi kunokundwendwela kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya okanye kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya ukuze kube lula, ukhuseleko kunye nokhuseleko.
Ungahlala ixesha elingakanani eIndiya ngeVisa yeTourist?
Kukho iinketho ezininzi zale Visa yabakhenkethi yaseIndiya efumanekayo kubaNdwendwe ngokwexesha ngoku. Ifumaneka ngezihlandlo ezi-3 ukusuka ngo-2020:
Usuku lwe-30: Isebenzayo kwiintsuku ezingama-30 ukusuka kumhla wokungena eIndiya kwaye isemthethweni ukuba ungene kabini.
U-1 unyaka: Isebenzayo imihla engama-365 ukusukela kumhla wokukhutshwa kwe-eTA kwaye yiVisa yokungena kabini.
Iminyaka emi-5: Isebenzayo iminyaka emi-5 ukusuka kumhla wokukhutshwa kwe-eTA kwaye yiVisa yokungena kabini.
Ukuqinisekisa kweentsuku ezingama-30 i-India Visa iphantsi kophazamiseko oluthile. Unokufunda malunga nokucaciswa kweVisa yoKhenketho lweentsuku ezingama-30.
Qaphela: bekukhe kwakho iVisa yeentsuku ezingama-60 ukuya eIndiya efumanekayo ngaphambi kowama-2020, kodwa sele ikhutshiwe.
Zithini iimfuno zeVisa yabakhenkethi eIndiya?
IVisa yabakhenkethi ifuna la maxwebhu angezantsi.
Ikopi enombala evavanyiweyo yephepha lokuqala (lokuzalwa) kwipaspoti yabo yangoku.
Ifoto yombala yencwadana yokundwendwela yamva nje.
Ukuqinisekiswa kwepasipoti yeenyanga ezi-6 ngexesha lokungena eIndiya.
Ngawaphi amalungelo kunye neempawu zeVisa abakhenkethi eIndiya?
Oku kulandelayo zizibonelelo zeVisa abakhenkethi baseIndiya:
I-Visa yeentsuku ezingama-30 yabakhenkethi ivumela ukungena kabini.
U-1 kunye neminyaka emi-5 Visa yabakhenkethi bavumela ukufakwa okuninzi.
Abanini banokungena eIndiya ukusuka nakwesiphi na isikhululo seenqwelomoya ezingama-28 kunye nezibuko ezi-5 zolwandle. Jonga uluhlu olupheleleyo apha.
Abaphethe i-Visa yabakhenkethi yaseIndiya banokuphuma eIndiya kulo naliphi na iZithuba zokuKhangela zokuFudukela kwenye indawo (ICP) ezivunyiweyo apha. Jonga uluhlu olupheleleyo apha.
Ukulinganiselwa kweVisa yabakhenkethi yaseIndiya
Ezi zithintelo zilandelayo ziya kusebenza kwiVisa yoKhenketho lwaseIndiya:
I-Visa yeentsuku ezingama-30 yabakhenkethi ingena kwiVisa yokuNgena kabini kuphela.
I-1 ye-Visa yoMkhenkethi oNyaka kunye ne-5 isebenza ngokusemthethweni kwiintsuku ezili-180 zokuhlala ngokuqhubekayo eIndiya.
le uhlobo lwe visa ayiguquki, ayinakushenxiswa kwaye ayongezi.
Abafakizicelo banokuthi bacelwe ukuba banike ubungqina bemali eyaneleyo yokuzixhasa ngexesha lokuhlala kwabo eIndiya.
Abafaki-zicelo akufuneki babe nobungqina betikiti lokubhabha okanye ukubhukisha ihotele kwiVisa yabakhenkethi yaseIndiya.
Bonke abafake izicelo kufuneka babe nencwadana yokundwendwela eQhelekileyo, ezinye iindidi ezisemthethweni, iipasipoti zozakuzo azamkelwa.
IVisa yabakhenkethi baseIndiya ayivumelekanga ukuba ityelele iindawo ezikhuselweyo nezithintelweyo.
Ukuba ipaspoti yakho iyaphelelwa kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezi-6 ukusuka kumhla wokungeniswa, uya kucelwa ukuba uyihlaziye incwadana yakho yokundwendwela. Kuya kufuneka uneenyanga ezi-6 zokunyaniseka kwipaspoti yakho.
Ngelixa awudingi kundwendwela unozakuzaku waseIndiya okanye iKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya ngayo nayiphi na isitampu seVisa yabakhenkethi yaseIndiya, uyafuna. 2 amaphepha angabhalwanga kwincwadana yakho yokundwendwela ukuze iGosa lokuNgenelela likwazi ukubeka isitampu sokunduluka kwisikhululo seenqwelomoya.
Awungekhe uhambe ngendlela eya eIndiya, uvunyelwe ukuba ungene ngeNqwelo moya kunye noMkhumbi kwiVisa yabakhenkethi yaseIndiya.
Yenziwa njani intlawulo yeVisa abakhenkethi eIndiya (iTourist Indian Visa)?
Abakhenkethi banokwenza intlawulo ukulungiselela iVisa yabo abakhenkethi eIndiya besebenzisa isheke, ikhadi leDebit, ikhadi letyala okanye iakhawunti yePayPal.
Iimfuneko ezinyanzelekileyo zeVisa yabakhenkethi eIndiya zezi:
Ipasipoti esebenzayo iinyanga ezi-6 ukusuka kumhla wokufika okokuqala eIndiya.
Isazisi se-imeyile esisebenzayo.
Ubukho bekhadi leDebit Card okanye iKhadi letyala okanye iakhawunti yePaypal yentlawulo ekhuselekileyo ekwi-intanethi kule webhusayithi.
Nceda ufake isicelo seVisa yabakhenkethi eIndiya kwiintsuku ezingama-4-7 ngaphambi kokuba ubhabhe.
Faka isicelo seVisa yabakhenkethi
© copyright ngu www.indiavisa-online.org
I-Disclaimer: I-Visa yaseIndiya ekhutshwe yile webhusayithi yorhwebo isetyenziswa ngokuthe ngqo kuRhulumente waseIndiya iOfisi yokuFumaneka. Urhulumente waseIndiya akachonga i-www.indiavisa-online.org ngokuthe ngqo, ngokungathanga ngqo okanye ngokukodwa. Intlawulo yobuchwephesha ihlawuliswa ngeenkonzo zethu kunye neLevy yeVisa kaRhulumente kwabo bafaka izicelo kule webhusayithi.